Shan dabeecadood oo haweenka dib u dhiga – iyo sida lagu beddeli karo - Waadinews | Somali News and Entertainments | Waadinews | Somali News and Entertainments
Waxay qaadan doontaa 202 sano inuu meesha ka baxo farqiga u dhaxeeya ragga iyo dumarka marka ay timaaddo fursadaha dhaqaalaha ee dunida – sida uu sanadkii hore sheegay Ururka Dhaqaalaha Adduunka.
“Qaar baa yiri ‘Waxaan u maleynayaa haddii aan shaqo fiican qabto, inay dadku i arki doonaan’,” ayay tiri Helgesen. “Kuwo kale ayaa qaba ‘haddii aan is muujiyo oo aan dadka is tuso, waxaa laga yaabaa inaysan i arkin’.”
“Ka feker qaab aad isku muujin karto. Tusaale ahaan, ‘Waxaan u maleynayaa in badroonigeygu uusan fahamsaneyn muhiimadda aan u leeyahay shirkaddan. Sidaas daraaddeed, toddobaadkiiba mar, waxaan u diri doonaa email aan ugu sheegayo waxa aan toddobaadkaas qabtay’.”
Baro sida loo dhoho ‘maya’
“Haddii aad mar walba dooneyso inaad dadka raalli geliso, waxaa kugu adkaan doonta inaad dadka la xisaabtanto, amaba inaad ‘maya’ dhahdo waxaadna ku dambeyneysaa inay dadku kaa faa`iideystaan, xiro xadkaaga waqti badanna ku bixi.”
“Naftaada ku dheh: ‘Hadda shaqooyin badan ayaan qabtaa, sidaas daraaddeed bisha xigta, marka ay dadku iga codsadaan inaan howl kale qabto, waan ka fekeri doonaa kahor intaan haye dhihin. Waxaan ka fekeri doonaa waxa aan ka faa`iidi doono, tani ma dan ayaa iigu jirta?'”
Inaad wax walba keligaa qabato
“Dhibaatada ugu weyn ee ay taasi leedahay waa inay kugu adkaato inaad dadka howl u dirsatid,” ayay tiri Helgesen. “Waxaan aalaaba maqlaa dad dhahaya, ‘Waxaa fudud inaan aniga howshaas qabsado’.”
“Waxaad raadisaa qof aad howsha u dirsan karto,” ayay tiri Helgesen. “Sii fursad, talo-bixin sii, balse adigu ha hor boodin.”
Ka gududb khaladaadkii kaa dhacay
Haweenku waxay mar walba xusuustaan khaladaadkii ay sameeyeen si ka badan ragga – taas ayaana dib u dhigta, sida ay sheegtay Helgesen. “Waa hab aad ku cadaabeyso naftaada.”
Taas beddelkeed, waxay sheegtay inay habboon tahay inaad naftaada dejiso – u sheeg naftaada ‘waxaad tahay bani`aadam, sida dadka kale’ kana soco khaladaadkii aad sameysay.
Jooji is liididda
Raalligelinta, inay adeegsadaan erayo ay ka mid yihiin “Ma ii heli kartaa keliya hal daqiiqo?” iyo inaysan amar bixin – waa waxyaabaha ay haweenku sameeyaan.
“Haddii aad dooneyso inaad muujiso inaad madax tahay,” Helgesen ayaa ku talineysa, “waa inaad booskaaga garatid, is muuji adoo og inaad mudan tahay, oo iskuna kalsoon.” BBC